I-Adams Intakumba kunye neKick Collar yeeNja
Eli phepha linolwazi nge-Adams Flea kunye neTick Collar yeeNja ze ukusetyenziswa kwezilwanyana .
I-Adams Flea kunye neTick Collar yeeNja eziKhombisayo
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeAdams Flea kunye nokuPhawula ikhola yezinja
Isikhokelo kunye nolwazi lokulinganisa i-Adams Flea kunye neTick Collar yeeNja
Ilingana ukuya kwii-26
INYANGA ezisi-7 Ukukhuselwa
I-Adams iFlea kunye neTick Collar yeeNja zokuLumkisa
MUSA UKUVUMELELE ABANTWANA BADLALA NGale KHOLA
FUNDA IBHAYIBHILE YONKE PHAMBI KOKUSETYENZISWA KONKE.
SEBENZISA KUPHELA IZINJA.
IINGOZI KWABANTU NEZILWANYANA ZASEKHAYA
Kuyingozi ukuba iginyiwe okanye ifunxwe ngesikhumba. Kubangela ukucaphuka kwamehlo okuphakathi. Kuphephe ukudibana namehlo, ulusu, okanye impahla. Hlamba izandla kakuhle ngesepha namanzi emva kokuphatha naphambi kokutya, ukusela, ukuhlafuna itshungama, ukutshaya, okanye ukusebenzisa indlu yangasese.
Tsalela iZiko loLawulo lweTyhefu okanye ugqirha kwangoko ngengcebiso yonyango. Ngaba umntu usele iglasi yamanzi ukuba uyakwazi ukuginya. Musa ukwenza ukugabha ngaphandle kokuba uxelelwe njalo yiZiko loLawulo lweTyhefu okanye ngugqirha. Musa ukunika nantoni na ngomlomo kumntu ongekho zingqondweni.
Ukuba kulusu okanye kwimpahla
Khulula iimpahla ezingcolileyo. Hlanganisa ulusu kwangoko ngamanzi amaninzi kangangemizuzu eyi-15-20. Tsalela iZiko loLawulo lweTyhefu okanye ugqirha ufumane ingcebiso ngonyango.
Bamba iliso livulekile kwaye uhlambe kancinci kwaye kancinci ngamanzi imizuzu eli-15 ukuya kwengama-20. Susa iilensi zonxibelelwano, ukuba zikhona, emva kwemizuzu emi-5 yokuqala, ke qhubeka uhlamba iliso. Tsalela iZiko loLawulo lweTyhefu okanye ugqirha ufumane ingcebiso ngonyango.
Yiba nesikhongozeli semveliso okanye ileyibhile xa ubiza iZiko loLawulo lweTyhefu okanye ugqirha, okanye usiya kunyango. Unokuqhagamshelana no-800-234-2269 ngolwazi olungxamisekileyo lonyango.
Qaphela oGqirha nooGqirha bezilwanyana:
Le mveliso iqulethe i-tetrachlorvinphos (i-organophosphate) eyi-cholinesterase inhibitor. Iimpawu zeCholinergic zinokubandakanya ukugcwala, i-miosis, ukungqinelani, ukuthambeka kwemisipha kunye / okanye ubuthathaka, ukugabha kunye norhudo. I-Atropine yinto echaseneyo. I-2-PAM inokusebenza ngokufanelekileyo njengesihlomelo kwiatropine. Tsalela umnxeba ku-800-234-2269 okanye iZiko loLawulo lweTyhefu ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya.
Kukwaphula umthetho wase-Federal ukusebenzisa le mveliso ngendlela engahambelani nelebheli yayo.
SUSA IKHOLOLA KWIPHAKHE, QHAWULA UMGANGATHO KANYE NETRULA UKUZE UVUSELELE IGENERITES YOKUNGABulali INTSHAYELELO. Njengoko ikhola iqala ukusebenza, umgubo omhlophe omhlophe uya kubonakala ngaphezulu.
Sukuyisebenzisa kwiinjana ezingaphantsi kweeveki ezi-6 ubudala. Sukuyibhengeza ikhola de ibe ilungele ukusetyenziswa. Beka i-Adams ™ iFlea & iTick Collar yeeNja ezijikeleze intamo yenja, zilungelelanise ukulunga okufanelekileyo, kunye nebuckle endaweni. Ikhola kufuneka inxitywe ngokukhululekileyo ukuvumela ukukhula kwenja kunye nokuvumela ikhola ukuba ihambe entanyeni. Ngokubanzi, ikhola efanelekileyo ngokufanelekileyo yile xa, xa ibotshiwe, iya kuthoba ngokukhawuleza phezu kwentloko yenja. Shiya ii-intshi ezi-2 okanye ezi-3 kwikhola yolungelelwaniso olongezelelekileyo kwaye unqunyulwe kwaye ulahle ubude obongezelelweyo.
I-wellbutrin yinto elawulwayo
Dibana nogqirha wezilwanyana ngaphambi kokuba usebenzise le mveliso kwizilwanyana ezinesiphene, ezigugileyo, okanye ezinamayeza. Ukuba isetyenziswe kwizinja ezikhulelweyo okanye ezokuncancisa, sukuyibuyisela ikhola de iinjana okungenani zibe neeveki ezi-6 ubudala. Ubuntununtunu bunokwenzeka emva kokusebenzisa nayiphi na imveliso yeziyobisi kwizilwanyana zasekhaya. Ezinye izilwanyana zinokucaphuka nayiphina ikhola ukuba ifakwe kakhulu. Ukuba oku kuyenzeka, yikhulule ikhola. Ukuba ukucaphuka kuyaqhubeka, susa ikhola kwinja. Ukuba iimpawu zobuntununtunu zenzeka, susa ikhola uze uhlambe isilwanyana sakho ngesepha encinci kwaye uhlambe ngamanzi amaninzi. Ukuba iimpawu ziyaqhubeka, qhagamshelana nogqirha wezilwanyana ngoko nangoko. Sukuyisebenzisa le mveliso ezinjeni ngaxeshanye okanye ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 ngaphambi okanye emva konyango okanye ukubhencwa kwi-cholinesterase inhibiting drug, pesticides, or chemicals. Nangona kunjalo, iiflaya kunye neekhola zekhalane zinokutshintshwa kwangoko.
Le khola yenzelwe ukuba isetyenziswe kuphela njengomvelisi wokubulala izinambuzane.
Ikhola iya kuqala ukubulala iintakumba kunye namakhalane kwangoko. Ukukhuseleka kwayo ngokupheleleyo ekubulaleni amakhalane kuyakwakhiwa kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokubekwa kwisilo-qabane. Ukukhuselwa okuqhubekayo kunye nokukhusela phantsi kweemeko eziqhelekileyo, buyisela ikhola rhoqo emva kweenyanga ezisixhenxe. Ikhola ibulala amakhalane iinyanga ezintlanu kwaye incedisa kulawulo lwazo iinyanga ezi-2 ezongezelelweyo. Phantsi kweemeko apho izinja zichaphazeleka kwizintakumba ezinobuzaza kunye nokuhlaselwa ngamakhalane, kunganyanzeleka ukuba ubeke ikhola rhoqo, nangona kunjalo, sukuyibuyisela ikhola rhoqo ngaphezulu kweenyanga ezintlanu. Ukumanzisa akuyi kuphazamisa ukusebenza kwekhola okanye ukukhuselwa kwesilwanyana. Ukuba inja iyaqubha okanye iphume emvuleni, akuyomfuneko ukuba ususe ikhola. Ikhola ye-Adams ™ inokunxitywa ngekhola rhoqo. Kuyacetyiswa ukuba indawo yokulala yezilwanyana okanye indawo yokulala inyangelwe intakumba kunye nolawulo lwethikh kunye neemveliso ezibhaliselwe olu setyenziso njengeAdams ™ Intakumba & Tick Ukutshiza kweKhaya.
Sukungcolisa amanzi, ukutya okanye ukutya ngokugcina nangokulahla.
Ukugcinwa kwezinambuzane: Gcina le mveliso kwindawo epholileyo neyomileyo engenakufikeleleka ebantwaneni.
Ukulahlwa kwezinambuzane: Ukuba akukho nto: Isikhongozeli esingabuyisekiyo. Sukuphinda uyisebenzise okanye uphinde uyigcwalise. Isithembiso sokurisayikilisha, ukuba sikhona. Ukuba inxalenye igcwalisiwe: Tsalela umnxeba iarhente yendawo ogcina kuyo inkunkuma ukuze ufumane imiyalelo yokulahla. Ungaze ubeke imveliso engasetyenziswanga phantsi nakweyiphi na idreyini yangaphakathi okanye yangaphandle.
PHAKATHI Igadi kunye noPet
Yenzelwe: Igadi eseMbindini kunye neNkampani yePet , I-1501 East Woodfield Road 200W, Schaumburg, Illinois 60173
Ngolwazi okanye izimvo, tsalela umnxeba ku-800-234-2269
Tyelela iwebhsayithi yethu kwi-adamsfleacontrol.com
EPA REG. Inombolo 2596-84-89459
I-EPA Est. No. 2724-TX-1
© 2004-2014, 2015 Iinkampani zeFarnam, Inc.
Igadi esembindini kunye nesilwanyana kunye noyilo luphawu lwentengiso lweCentral Garden kunye neNkampani yePet.
Zonke ezinye iimpawu zorhwebo ziyipropathi yabanini bazo.
1 isacholo somqala
Iinkampani zeFARNAM, INC.
INDLELA EYI-301 ENTSHONA YOSBORN, P.O. IBHOKISI 34820, IPHOENIX, AZ, 85013-3928
Itholi yasimahla: 800-234-2269
Indawo yeWebhusayithi: www.farnam.com
Yonke imizamo yenziwe ukuba kuqinisekiswe ukuchaneka kwe-Adams Flea kunye neTick Collar yolwazi lwezinja olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yase-US okanye into yokufaka iphakheji.
intsangu iseshedyuli 1 iziyobisi
forskolin yokunciphisa idosi
indlela yokuthintela ilungelo lokushicilela kwi-youtube
Iimbali ezintathu zamahashe
.45 i-sodium chloride